Anisan’ny tena mampitaraina ny maro ny etsy Ambodin’Isotry akaikin’ny aigle noir izay sady goakabe no hiandronan’ny rano maloto. Raha tokony ho 10 minitra raha betsaka no hivoahan’ny taxi-be iray miainga eo Ambodin’Isotry miazo ny tobim-piantsonana FOP 67 ha dia lasa hatao hatramin’ny 45 minitra izany, indrindra rehefa andro Sabotsy tsena iny. Toraka izany koa ny eny Antohomadinika manaiky ny tobim-piantsonana miazo an’i Mahitsy izay miteraka fitohanana goavana hany ka saika tara avokoa ireo mpiasa sy mpianatra mampiasa iny lalana iny isan’andro. Raha araka ny fanadihadiana hatao teny an-toerana moa dia tsy mbola nisy tompon’andraikitra tonga nijery ireo lalana ireo mihitsy teto an-drenivohitra hatramin’izay. Antso avo araka izany no hatao amin’ireo tompon’andraikitra voakasika mba hijery akaiky ireny foto-drafitrasa hiankinan’ny fiainam-bahoaka ireny.